Stock Market Nhau | Economics Zvemari (Peji 3)
Zhizha haisi nguva yakanaka yekudyara. Huwandu hwekutengesa hunodonha zvakanyanya uchienzaniswa nedzimwe nguva dzegore. Kusvika panguva yeZhizha haisi nguva yakanaka yekudyara, uko huwandu hweanobvumirana unodonha zvakanyanya uchienzaniswa nedzimwe nguva dzegore.
Zhizha rinosvika rimwezve gore uye nenguva yenguva iyo yakagadzirirwa kuzorora nekuzorora. Kwete kuva inovaitira nguva yakanaka. Zhizha rinosvika rimwezve gore uye nenguva yenguva yakatemerwa kuzorora nekuzorora. Isiri nguva yakanakisa yekudyara mumisika yemari.
Chimwe chezvigadzirwa zvinotengeswa nenhamba yekuchengetedzeka uye makambani ekutsinhana-masheya maakaundi emari anoitirwa Chimwe chezvinhu zvinogadzirwa nenhamba dzakachengetedzeka uye makambani emasheya emusika ari maakaundi emari anoitirwa varimi vanoita mari zvakanyanya mune mutual mari uye hazvidi real-time makotesheni
Hurumende nyowani ichave neSpain mumwedzi inotevera inofanirwa kubatsira varimari vadiki nepakati kuti vagadzire zvakanaka pavanogadzira nzira yavo Yeimwe yezvikamu zvakakanganisika haigone kuve magetsi, uye kwete pasina, zvinofanirwa kuyeukwa kuti izvi mhando dzekambani dzinowanzo kutungamira kucheka mushure mesarudzo
Kunyangwe nekusaziva kwakadzika mumisika yemabhizimusi yeSpain, hapana mubvunzo kuti mikana yebhizinesi inoramba iripo mumisika iyi. Kunyangwe kusagadzikana kukuru mumisika yemabhizimusi yeSpain, hapana mubvunzo kuti mikana yebhizinesi ichiripo panguva ino.
Sarudzo yeEuropean Central Bank (ECB) yekunonoka kukwira kwemitero yenzvimbo mueuro iri kuita zvakasiyana paChisarudzo cheEuropean Central Bank (ECB) kunonoka kukwira kwemitero yemitero munzvimbo yeuro kukanganisa kwakasiyana zvichienderana nedanho riri kutaurwa
Mhedzisiro yesarudzo yakatorwa neGoogle kuputsa hukama hwayo neChina Chinese trademark Huawei yakonzera kunetsekana kukuru pamusoro pemhedzisiro yesarudzo yakatorwa neGoogle kuputsa hukama hwayo neChina Chinese trademark Huawei yakonzera kunetseka kukuru kune zvidiki nepakati. vatengesi
Zhizha rino rinogona kunge riri rekupedzisira nemitero yakaderera muzvikamu zveeuro, sekureva kweEuropean Central Bank (ECB). Ose maziso Chero zvakadaro, muzhizha rino unogona kutora akateedzana marongero ekudyara ayo anogona kufarira zvaunofarira mukati memwedzi iyi inokosha
Patinenge takanyura mumwedzi inopisa yezhizha, hunhu hwesangano rekushanya ndidzo dzimwe pfungwa dzekufunga nezvadzo Patinenge takanyura mumwedzi inopisa yezhizha, hunhu hwesangano rekushanya ndidzo dzimwe pfungwa dzeku funga nezvekuita purofiti inobatsira munguva ino yegore
Imwe yemaitiro anowanikwa kune vashoma nevepakati varimi vanoita kuti mari yavo iwane purofiti vasingatore njodzi ndeyokubatanidza madipoziti Imwe yemaitiro anowanikwa kune vashoma nevepakati varimari kuti mari yavo iwane purofiti pasina fungidziro yenjodzi ndeye kubatanidza yakatarwa-temu bhangi dhipoziti kune inosarudza indekisi yeEuropean equities, iyo Eurostoxx 50
Iyo Ibex 35 Zvikwereti uye Ibex 35 Inverso ndedzimwe dzisingazivikanwe indices dzemasheya uko vatyairi vadiki nevepakati vanogona kuisa mari Ibex 35 Zvikamu uye Ibex 35 Inverso ndedzimwe dzisingazivikanwe indices dzemasheya uko vatyairi vadiki nepakati vanogona kuisa mari yavo kuchengetedza
Chikamu chemagetsi chete ndicho chakaramba chakayangarara kubva mukudonha mune yakasarudzika indekisi yeSpain equities, iyo Ibex 35. Munguva pfupi chete chikamu chemagetsi ndicho chakaramba chiri pamusoro uye sedziviriro kubva pakuwa mune rondedzero inosarudzika yeSpanish equities, iyo Ibex 35 uye kuti mukati rinopfuura vhiki rapfuura kubva pamazana mapfumbamwe nemazana mapfumbamwe kuenda pamakumi mapfumbamwe emapoinzi
Zvirokwazvo chimwe chezvishuwo zvako zvekudyara kutenga masheya muzvikwereti. Asi iwe unofanirwa kuziva kuti iwe haufanire Izvozvi iwe une zvimwe zvigadzirwa zvekubvumidzwa izvo zvinokutendera iwe kuti uwane mari inochengetedza, kunyangwe muzviitiko zvakawanda pasi peanonyanya hasha emamodeli emari.
Zvirokwazvo chimwe chezvishuwo zvako zvekudyara ndezvekutenga migove muzvikwereti nezvimwe zvivimbiso zvekubudirira. Zvakanaka, zvirokwazvo chimwe chezvishuwo zvako zvekukurumidza mukudyara ndechekutenga migove muzvikwereti nezvimwe zvivimbiso zvekubudirira.
Musika we Forex, iyo mune mari inotsinhaniswa, inogadzira mikana yakawanda yekutengesa mikana, sezvo iri imwe ...
Misika iri kusimukira idzo nyika kana hupfumi huri muchikamu chekuchinja pakati penyika dzichiri kusimukira nenyika Nyika misika iri kusimukira idzo nyika kana hupfumi huri muchikamu chekuchinja pakati penyika dzichiri kusimukira nenyika dzakabudirira.
Zvinoenderana nedhata rakapihwa neReuters, IAG, Endesa, Enagás neRapsol ndiwo masheya anopa goho repamusoro soro. Zvinoenderana nedhata rakapihwa neReuters, IAG, Endesa, Enagás neRapsol ndiwo masheya ane kudzoka kwakanyanya nedividendi parizvino. inopihwa mune yakasarudzika indekisi yeSpanish equities, iyo Ibex 35
Yange iri nguva yakareba kubvira pakasarudzwa indekisi yeSpanish equities, iyo Ibex 35, isina kumbofamba zvakadaro. Mune imwe nhanho inofamba pakati Kwenguva yakareba indekisi inosarudza yeSpanish equities, iyo Ibex 35, haina kufamba neakadaro mamiriro. Mune tambo inofamba pakati pezviuru mazana mapfumbamwe nemazana mapfumbamwe nemazana matanhatu emakiromita ayo ndiwo anoratidza mafambiro muneimwe nzira
Chokwadi hauna kumbonzwa nezveVibex mune yekudyara nyika? Zvakanaka, indekisi iyo inogona kupa chisina kujairika chiratidzo chekuvhura Iyo Vibex seizvi haina kuisa kuchengetedzeka kana makambani akanyorwa uye iri neimwe nzira yekutya index senge iyo VIX muUnited States uye inoshandiswa kuziva iyo chaiyo mamiriro yemisika
Masheya ekutsinhana kutenderera pasirese akararama kuburikidza nezuva rakaomarara semhedzisiro yechikamu chitsva chairi kuve ...
Mari yeSpanish haina kuganhurirwa kune iyo chete Ibex 35, sevamwe vatengesi vadiki nepakati vanogona kufunga panguva ino. Kune vamwe Kune mamwe madhaidhi asinganyanyo kuzivikanwa anogona kuve chinhu chedu mashandiro kubva zvino zvichienda mberi, uye mamwe acho akakosha, kunyangwe mamwe acho asingazivikanwe nechikamu chakanaka chesavers.
Sarudzo pakati pezvigadzirwa kubva pamari yakatarwa kana ma equities ndeimwe yesarudzo dzinomuka kumeso kwako kudyara Sarudzo pakati pezvigadzirwa kubva pamari yakatarwa kana maequit ndeimwe yesarudzo dzinoitirwa kudyara kwavo kwehafu yepiri.
Kupunzika mumusika wemasheya chiitiko chinonyatso kuvezwa mupfungwa dzevazhinji vashoma uye vepakati varimi. Izvo hazvigone kukanganwika kuti mune dzimwe nguva, kudonha mumusika wemasheya ndiyo mamiriro ayo ari akanyarara mupfungwa dzevazhinji vadiki nepakati varimi.
BME, kuburikidza neBilbao Stock Exchange, inobvuma kutengesa mangwana nyaya nyowani yemabhondi akasimba yakatangwa neBasque Hurumende nemari yeBME, kuburikidza neBilbao Stock Exchange, inobvuma kutengesa mangwana nyaya nyowani yemabhondi akasimba akatangwa neBasque Government kwemazana emamiriyoni mazana matanhatu ema euro
Vashandi vanogona kazhinji kuzvibvunza mibvunzo yakawanda iyo isingagoni kupindurwa nekuda kwezvikonzero zvakawanda. Muchinyorwa chino tichagara tichi bvunza mibvunzo yakawanda iyo varimi vanogona kuzvibvunza uye inogona kunge isina mhinduro nekuda kwezvikonzero zvakawanda uye kuti muchinyorwa chino ticha tarisa zvimwe zvezvinonetsa zvatinogona kubata kweinopfuura nguva imwe.
Kamwe kumwe kwekusahadzika kwekuti vashoma uye vepakati varimi muSpain vanochengeterwa kwakagadziriswa, iyo yakabatana nesarudzo dzese dzakaitika Chingangove chimwe chekusahadzika icho vatengesi vadiki nepakati muSpain, icho chine hukama ne sarudzo dzakawanda dzakaitika Svondo rapfuura iyi
Kazhinji pane kwakave nemusiyano wakakura zvakadaro pakati pehunhu hwemabhangi nemagetsi. Kwazvinotorwa zvakazara Zviri munguva dzakapamhama dzehupfumi uko kukosha kunoenderana nemabhangi kungave nekuita kuri nani
Zhizha zvirokwazvo mwaka wakaomarara wekuenzana misika yemari yezvikonzero zvakasiyana izvo isu zvatichatsanangura pazasi. Zhizha zvirokwazvo mwaka wakaomarara wekuenzana misika yemari yezvikonzero zvakasiyana izvo isu zvatichatsanangura pazasi.
Chimwe chezvinangwa zvemumwe muzvinabhizimusi mudiki nepakati chinofanirwa kunge chiri chekudzivirirwa kwenzvimbo dzavo mumisika yemari pamusoro apa Chimwe chezvinangwa zvemumwe muzvinabhizimusi mudiki nepakati chinofanirwa kuve kuchengetedzwa kwenzvimbo dzavo mumisika yequity seimwe yekiyi zvibudirire
Iyi haisi nguva yakanaka yehunhu hwesangano remagetsi. Mumavhiki apfuura, nepo misika yemari yakasangana nevamwe Pane chinhu chiri kunyanya kukanganisa magetsi magetsi hapana chimwe kunze kwekusahadzika kuri kugadzirwa mune zvematongerwo enyika zveSpanish semhedzisiro yesarudzo
Kunyangwe hazvo equities iri kuita mushe mushe, hapana chakakosha ndechekuti kugadzirisa mukati mekota yechipiri yegore Mukana wekukanganisa kwekukoshesa pamisika yemasheya, hapana mubvunzo kuti kune mamwe matunhu anogona kunge aine huipi hwakanyanya kupfuura mune mamwe maitiro
Iyo Income 4 Bank Ongororo Dhipatimendi yakaratidza yayo Investment Strategic ye2019, yakaratidzirwa ne "kudzikira kwehupfumi kutenderera Hatigone kukanganwa panguva ino kuti mamiriro asati akwira mwero munzvimbo yeeuro, zvichave zvakakosha ramangwana remhando ipi neipi yekudyara
Kuva kuda kupedza semester yekutanga yegore inguva yakanaka yekufunga kuti chii chingaitika kana kubva parizvino mari yekudyara yave kuda kupedza semester yekutanga yegore inguva yakanaka yekufunga zvinoitika kana kubva zvino zvichienda Panguva ino, kudyara muzvikwereti kwakadzikira zvakanyanya
Pa 28, veSpain vane musangano nemavhoti. Asi vatyairi vanofarirawo kuziva kuti misika ichava sei.Mamwe matunhu emasheya ane hunyoro kupfuura vamwe maererano nehutungamiriri hunogona kuumbwa mushure mekuvandudzwa kwesarudzo huru mwedzi uno.
Kunouya nguva yegore, senge Isita, apo chengetedzo yekuchengetedza inofanira kukunda pamusoro pevamwe kufunga. Mupfungwa iyi, panouya nguva yegore, senge Svondo Dzvene, apo chengetedzo yekuchengetedza inofanira kukunda pamusoro pevamwe kufunga.
Zvese zvinhu zvinoramba zvakangofanana mumutemo wezvemari mueuro zone, mushure memusangano wapfuura wakaitwa neEuropean Central Bank (ECB). Mukutenderera kweZvinhu zvese zvinoramba zvakangofanana mumutemo wezvemari mudunhu reyuro, mushure memusangano wapfuura wakaitwa neEuropean Central Bank (ECB). Pamusangano wevatori venhau, mutungamiri wavo, Mario Draghi, akataura kuti musangano wedare "wanga usiri kushanda"
Kana paine chengetedzo yakanyorwa pamusika wemasheya inochengetedza hunyanzvi hwehunyanzvi, zviri pachena kuti Banco Sabadell. Mutengo wayo wakapihwa.Kana paine chengetedzo iyo yakanyorwa pamusika wemasheya inochengetedza hunyanzvi hwakanyanya hwehunyanzvi, izvo zviri pachena kuti Banco Sabadell
Chikamu chechipiri chegore chinogona kuunza kushamisika kusinganzwisisike maererano neIbex 35 securities dzinofanirwa kuita portfolio yedu yekudyara Chikamu chechipiri chegore chinogona kuunza kushamisika kwakawanda maererano neIbex 35 securities dzinofanirwa kuita portfolio yedu yekudyara mu, zvirinani ne kupera kwegore
Hapana mubvunzo kuti basa rekutenga masheya mumisika yequity rinoda kuyedza kudiki kune chikamu chemakambani madiki nepakati Pakati Hapana mubvunzo kuti basa rekutenga zvikamu mumisika yequity rinoda kuyedza kudiki chikamu chediki uye vepakati varimi kuburikidza nhevedzano yedata
Zvichida imwe yenzira dzekudyara dzinoshanda kwazvo inogadziriswa kuburikidza nezvikamu zvine kukura kwakanyanya muzvinhu zvehupfumi. Kune rimwe divi, hazvigone kukanganwika kuti Amadeus ndomumwe wechengetedzo dzekuenzana kweSpanish ine yakanakisa hunyanzvi hune izvi mune chaiwo nguva
Parizvino, indekisi yakasarudzika yemabhizimusi eSpanish, Ibex 35, yatove pamapoinzi mazana mapfumbamwe nemazana matanhatu. Mune imwe nzira zvinoita sekunge kune akati wandei misika mune epasi rose equities izvo zvinogona kubatsira zvakanyanya kuvhura zvinzvimbo mune izvi zvemari zvinhu
Naturgy ndechimwe chekuchengetedzeka kuri kuita zvakanakisa mune yakasarudzika index yeSpanish equities. Zvese kusvika parizvino gore rino uye muNaturgy ndechimwe chekuchengetedzeka kuri kuita zvakanakisa mune yakasarudzika indekisi yeSpanish equities, kusvika parizvino gore rino uye gore rapfuura
Vashandi vanogona kusarudza kubva kumarudzi akasiyana-siyana emabhangi kuti mari yavo inobhadhara mugore rino rakaoma kumisika yemari Bankia yakawana purofiti inokwana 703 mamirioni euros muna 2018, iyo inomiririra kuwedzera kwe39,2% zvichienzaniswa ne2017.
European Central Bank (ECB) nguva pfupi yadarika yakagadzirisa fungidziro yayo yezvehupfumi kune nyika dzeeurozone mumakore mashoma anotevera. Iri kupi iri zano rekugadzirisa kudzikira kwehupfumi kuchazogadziridzwa nekuchenjerera kwakanyanya mumatura akasarudzwa
Imwe yematambudziko inosanganisirwa nechero shanduko yekushandura ndeyekuti iwe unokanganisa kana uchitenga pamusika mutengo. Ndokunge, kuti iwe ugone kugadzirisa aya matambudziko mukudyara mumisika yemari, tiri kuenda kuzopa mhinduro dzakateedzana kuyedza kurerutsa chiitiko ichi chinogona kuitika nemamwe maratidziro mukuita kwako pamusika wemasheya.
Sipanish stock market yakatengesa mamirioni makumi mana nemakumi mana nemakumi mana emamiriyoni munaNdira, 41.407% kupfuura mumwedzi wapfuura uye nemwedzi wakanakisa kubva muna Gumiguru, kunyangwe 6,8% iri pasi peMumwe weiyo mienzaniso yakakosha ndeye ramangwana pane indices yemusika wemasheya uye inomiririra imwe nzira yekunzwisisa kuisa mari mumisika yemari
Hapana mubvunzo kuti kuSpain kune zvimwe zvinongedzo zvinopfuura iyo yakasarudzika indekisi yeSpanish equities, iyo Ibex 35. Zvikurukuru, iyo Ibex 35 Dhidivendi chiratidzo chinobatsira zvikuru kune vanoita mari chinosanganisira kusiyana kwemitengo yemitengo.
Vashandi vanogona kusarudza kubva pamhando dzakasiyana-siyana dzekutsvaga kuti vazive mamiriro ezvinhu emari yavo. Nguva dzose zvichibva paVashambadziri vanogona kusarudza kubva kune dzakasiyana-siyana ruzivo ruzivo kuti vanyatso tarisa hunhu pamusika wemusika
Imwe yekiyi dzinoshanda kwazvo dzekugadzirisa zviwanikwa inogara mukugadzira chaiyo kutenderera mumitengo inoumba mari yedu Imwe yekiyi dzekugadzirisa zviwanikwa inogara mukugadzira kutenderera kwakakodzera mumaitiro anoumba yedu. mari yekudyara
Pakutanga, chenjera masheya ayo anotengesa pazasi peyuro imwe. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti kana zvasvika Pakutanga, munhu anofanirwa kuve anongwarira nezve masheya emitengo ayo anotengesa pazasi peyuniti yuniti, uye pakati pezvimwe zvikonzero nekuti kana mamiriro aya asvika, zvakaomarara kuenda kuruzhinji. Pamusoro peeuro.
Nzira yekutenga sei muhombodo?
Kupinda nemazvo mumisika ndechimwe chezvinangwa zvemumwe muzvinabhizimusi uye nekuda kweizvi anofanira kuronga zano rakanyatsorongwa.Kupinda nemazvo mumisika nekutenga ndicho chimwe chezvinangwa zvemumwe muzvinabhizimisi uye nekuda kweizvi anofanira kuronga zvakanyatsorongwa zano
Internet Europe ndiyo indekisi inounganidza chitaurwa chemakambani akakosha mune ino tekinoroji mukondinendi yekare uye, mune iyo Internet Europe ndiyo indekisi inounganidza makotesheni emakambani akakosha eiyi tekinoroji kondinendi yekare uye, iyo inosanganisira kubva kumakambani akabatanidzwa kune vamwe mukuita kwekuwedzera
Kumwe kutya kuri kudivi revashambadziri vadiki nepakati panguva ino ndeyekuti misika yemari inogona kupinda mune yakajeka Imwe yekutya kune chikamu chevashambadzi vadiki nepakati panguva ino ndeyekuti misika yemakero inogona kupinda mune yakajeka downtrend
Mari yekudyara ndeimwe yezvishandiso zvakasarudzika kune vazhinji vashoma nepakati varimi. Asi muchimiro chayo chakarongedzwa zvigadzirwa, iwo ari chaiwo anoshanda zano zano kukunda isina kusimba kuita kunopihwa nemabhangi zvigadzirwa panguva ino.
Usati wavhura zvigaro mumisika yemaketi zvichave zvakakosha kwazvo kuti iwe ujekese nezve zvikamu zvavari kuenda Usati wavhura zvigaro mumisika yemaketi zvichave zvakakosha kuti iwe ujekeswe nezvematunhu kwaachaenda kunanga yako kuchengetedza
Zvaiita kunge zvisinga fungidzike mwedzi mishoma yapfuura uye kunyanya pakupera kwa 2019. Asi chokwadi ndechekuti iyo inosarudzika equity index Yakaratidzika kunge isingafungidzike mwedzi mishoma yapfuura uye kunyanya pakupera kwa 2019. Asi chokwadi ndechekuti Iyo inosarudza indekisi yeSpanish equity, iyo Ibex 35, ikozvino yave pamapoinzi mazana mapfumbamwe nemazana matanhatu
Saka kuti izvo zvakaitika kwauri mugore rapfuura zvirege kuitika futi, tiri kuzokupa maitiro ekuzvibata kuitira kuti iwe uzive zvaunofanira kuita Dambudziko guru rekurasikirwa nemari mumisika yemari ndeyekuti zvinhu zvavanogona kuwedzera uye iwe warasikirwa mukushanda kwako mumusika wemasheya
Sarudzo dzeParamende dzeEuropean dze2019 dzakarongerwa kuitika munyika dzese dzeEuropean Union nemusi weSvondo, Chivabvu 26, 2019. Zuva rakatevera sarudzo dzemuna Chivabvu muEurope, misika yemakondinendi yekondinendi yakare ichapa mutongo, zvichienderana mhedzisiro
Bhengi rekudyara rekuUS JP Morgan achangobva kucheka kukosheswa kwemakambani esimbi eEuropean ArcelorMittal, Acerinox Bhengi rekudyara reUS JP Morgan achangobva kucheka kukosheswa kwemakambani esimbi eEuropean.
Cellnex pasina mubvunzo yave imwe yezvakanyanya kushamisa zvakanaka mumari mumwedzi ichangopfuura. Kubva payakatanga kunyorwa paCellnex, hapana mubvunzo kuti yanga iri imwe yezvishamiso zvikuru zvakanaka mumari mumwedzi ichangopfuura.
Chimwe chezvinhu zvitsva izvo kudyidzana kwepasi rose mukudyara hakuna kuunza ndiko kuoneka kwemapuratifomu emadhijitari emari asingazive.Mumapuratifomu ekutengesa edijitori izvo zvausingazowana izvo zvigadzirwa zvawanga uchibvumirana nebhangi rako zvachose.
Imwe yemaitiro ekudyara mumusika wemasheya pasina kuzviburitsa pachena inowoneka kuburikidza neyakagadziriswa-nguva mabhengi akachengetedzwa akabatana nemisika yeImwe yemazano ekudyara mumusika wemasheya pasina kuzviburitsa wega inoitwa kuburikidza neyakagadziriswa-nguva mabhengi akachengetedzwa misika yemari
Sarudzo yakaitwa neEuropean Central Bank (ECB) yekunonoka kukwira kwemitengo yemubhadharo munzvimbo ye euro yakaratidza kusiyana kwakaita sarudzo yeEuropean Central Bank (ECB) yekunonoka kukwira kwemitengo yemitero Munharaunda ye euro, yakaratidza. kusiyana kwemutengo wekuchengetedzeka kwemabhangi nemakambani emagetsi
Maitirwo azvino mumisika yezvemari, zvese zvakamisikidzwa uye mari inoshanduka, zviri kutungamira kune vamwe varimari vashoma nepakati varipo.Kune zvakawanda zvakasiyana pakati pemitambo yekubheja uye mari mune chaiyo izwi reizwi uye ichi chinhu chaunofanirwa kukoshesa
Kumwe kutya kuri kudivi revashambadziri vadiki nepakati parizvino ndechekuti chikwereti cheveruzhinji chakanyanya uye chinogona kuyera shanduko Chimwe chekutya pane chikamu chevashambadzi vadiki nepakati parizvino ndechekuti chikwereti cheruzhinji chakanyanya uye inogona kuyera shanduko yemisika
Kuziviswa kwekuitwa kwesarudzo huru musi waApril 28 hakusi kukanganisa kuenzana. Ichi chinhu chine simba rezve sarudzo dzinotevera hapana, zvirinani kwenguva uye nekukanganisa izvo zvinogona kuitika mumasvondo anotungamira kumhemberero yaro.
Chekupedzisira, indekisi inosarudza yeSpanish equities, iyo Ibex 35, yaunza pasi rutsigiro rwakasimba rwehunyanzvi iyo yainge yave nayo kwemwedzi yakati wandei muKupedzisira, indekisi inosarudza yeSpanish equities, Ibex 35, yaunza pasi simba rakasimba rehunyanzvi iro Ndakanga ndine kwemwedzi yakati wandei pamapoinzi mazana mapfumbamwe nemazana matatu
Iyo yenyika telecom Telefónica ndiyo kukosha kuri kudhonza indekisi yekusarudza yenyika, iyo Ibex 35, mushure mevakawanda Telecom Telefonica yenyika ndiyo kukosha kuri kudhonza indekisi yekusarudza yenyika, Ibex 35, mushure memwedzi yakawanda kusava nechokwadi kana kunyangwe nekurasikirwa kwakakura mumutengo wayo
Kudzoka kwezvikamu zano iro makambani akanyorwa pamisika yemari anoita neimwe frequency. Izvo zvakaonekwa Kutengazve kwemasheya zano iro makambani akanyorwa pamisika yemari anoita neimwe frequency
Pfungwa huru yevaongorori vezvemari ndeyekuti kukura kwehupfumi kucharamba kuchienderera gore rino, kunyangwe zviine hushoma pane iyo Imwe yemikana yakanakisa yekudyara mugore rino razvino, mumaonero echikamu chikuru chevanoongorora zvemari, inovimba nemakambani epakati nepakati
Hapana mumwe wevamiriri vezvemari anopokana kuti indekisi inosarudzika yemari inoshanduka, iyo Ibex 35, iri mune yakajeka tsika yekuzotevera. Hapana munhu wevamiriri vezvemari anokakavara kuti indekisi inosarudzika yemari inoshanduka, iyo Ibex 35, iri muchimiro chakajeka chekuzotevera
Ose ari maviri equities muEurope neUnited States ave kuda kusvika pamatanho avo epamusoro mumutengo wekuchengetedzeka kwavo. Nezvimwe zviratidzo Mhinduro yakanaka yekuita mari inochengetedza kubva ikozvino zvichienda mberi inomiririrwa nemisika yemari yeimwe nyika dziri kusimukira
Hapana mubvunzo kuti chirevo chemusoro uyu ndechimwe chezvinangwa zvechikamu chakanaka chevashambadzi vadiki nepakati. Pane imwe nguva, apo Imwe yezvinangwa zvechikamu chakanaka chevashambadzi vadiki nepakati, panguva, apo akasiyana akasarudzika zvigadzirwa zvemari zvisingatombo pfuure 1% mukudzoka kwavanopa kusevha.
Sarudzo yemusika wemasheya inoenderana kazhinji pazano rinofanirwa kutsanangurwa usati wavhura zvigaro mumisika Kune akateedzana makiyi ekudyara ayo anogona kubatsira vashandisi kunyatso fambisa mashandiro avo mumisika.
Makambani ekuvaka akakosha zvakanyanya muSpain, uye ari chikamu cheindekisi inosarudza yeSpanish equity, iyo Ibex 35, yakanyoreswa panguva yeIyo inonyanya kukosha makambani ekuvaka kuSpain, uye ayo ari chikamu cheindekisi inosarudza yeSpanish equities, Ibex 35 , vakanyoresa kuwedzera kwemutengo wavo wemusika pamusoro pemwedzi mitanhatu yapfuura
Imwe yenhau dzakwezva kutarisisa mumazuva achangopfuura ndeyekusiya basa kwemutungamiri weEndesa wepamusoro mushure memakore anopfuura gumi ari muhofisi. Mune Imwe yenhau dzakakwevera hanya mumazuva achangopfuura ndiko kusiya basa kwemutungamiri weEndesa wepamusoro mushure memakore anopfuura gumi ari muhofisi.
Kana chinangwa chevatengesi chiri kusarudza misika yeEuropean equity, hapana mubvunzo kuti dzimwe nzira dzakakura. Kune eEuropean stock indices ndeimwe nzira yekudyara pasina kusiya iyo miganhu yekondinendi yekare
Chimwe chezvinhu zvisingazivikanwe zvigadzirwa nevashambadzi vadiki nepakati zviri pachena izvo zvinonzi zvisungo zvekuda nyika. Saka kuti Chimwe chezvinhu zvisingazivikanwe zvigadzirwa nevashambadzi vadiki nepakati zviri pachena izvo zvinonzi zvisungo zvekuda nyika
Hapana mubvunzo kuti makambani emagetsi anga ari iwo makuru protagonists eSpanish equities mugore rapfuura. Iko chikamu ichi Hapana mubvunzo kuti makambani emagetsi anga ari iwo makuru protagonists eSpanish equities mugore rapfuura
Chimwe chezvinhu zvine hunyanzvi hwekuvhura kana kuvhara nzvimbo mumisika yemari inoumbwa kuburikidza nerutsigiro uye kuramba. Chimwe chezvinhu zvine hunyanzvi hwekuvhura kana kuvhara nzvimbo mumisika yemari inoumbwa kuburikidza nezvitsigiso
Mumakore achangopfuura, madigital emari mapuratifomu ave mufashoni senzira dzekuvandudza mari. Asi hazvisi zveMakore achangopfuura, ezvemari madigital mapuratifomu ave mufashoni senzira dzekusimudzira mari
Sipanish stock market yakatengesa mamirioni makumi mana nemakumi mana nemakumi mana emamiriyoni munaNdira, inomiririra 41.407% kupfuura mumwedzi wapfuura uye nemwedzi wakanakisa kubva muna Gumiguru, kunyangwe hazvo Nekuti nekuti kana huwandu hwekutengesa huri hudiki kwazvo zvinoreva kuti kukosheswa kana kuongororwa kwehunhu yakanyanya kusimba nheyo
Investor maitiro: vanoita sei njodzi?
Havasi vese vashoma uye vepakati varimi vanotora njodzi nenzira imwecheteyo. Izvi zvinoratidzwa mune ongororo ichangoburwa inonzi Chirevo pamusoro pemafambiro ezviito zvevashambadzi vadiki nepakati, iko kutaura kunoiswa pachokwadi chekuti chekutanga chemapoka
Hapana mubvunzo kuti indekisi inosarudzika yeSpanish equities, Ibex 35, iri munzira yekumira kubva kwazviri kunetsa kuti vabude mumusika. Hapana mubvunzo kuti indekisi inosarudza yeSpanish equities, Ibex 35 , Iri muchimiro che lateral icho chave chakavaomera kuti vabude mumwedzi ichangopfuura
Chimwe chezvinhu chinonyanya kukanganisa mutengo wemari yekuchengetedzeka huwandu hwezvibvumirano. Kusvika padanho rekuti ndechimwe chezvinhu zvinonyanya kukanganisa mutengo wechengetedzo yehuwandu ivhoriyamu yekutengesa kwemasevha.
Imwe yemafungiro matsva ekuti kuchengetedza kunobatsira kuri kugadzirwa kuburikidza neyakagadzirwa chigadzirwa uye panguva imwechete isingazivikanwe nechikamu.Kana mutengi aisa chiratidzo pamisika, inogona kuendeswa kune emari mapuratifomu edhijitari mune pfupi pfupi nguva
Imwe yekiyi dzekuita kuti mari irambe ichibatsira gore rino kugadzira sarudzo yakanaka mubato rekuchengetedza. Muiyi Imwe yekiyi dzekuita kuti mari irambe ichibatsira gore rino kugadzira sarudzo yakanaka muzvikamu zveyeti
Kana paine bhokisi rezvishamiso muSpanish equities iyo isiri iyo kunze kwekuparadzira kambani Día.Mazuva ano iri kugadzira nhau nekuti ine Kana paine bhokisi rezvishamiso muSpanish equities iyo isiri iyo kunze kwekuparadzira kambani Día
Chimwe chezvikamu zvemusika wemasheya chingangosangana nekuita kwakaipisisa pachiitwa ichi chatichangotanga icho chemagetsi. Iko Imwe yemashamba emusika wemasheya ayo anogona kusangana neyakaipisisa kuita mune ino chiitiko yatichangotanga ndeyeye magetsi
Vashoma varimi vanogona kufunga kuti hafu yekutanga yegore yaizove inowedzera mumisika yepasi rose yemari. Asi chokwadi ndechekuti vashoma vashambadzi vanogona kufunga kuti hafu yekutanga yegore ichave inosimudzira mumisika yepasi rose yemari
Kanzuru inotonga yeEuropean Central Bank (ECB) yakafunga kuchengetedza mitengo yemari isina kuchinjwa pamisangano yayo yekupedzisira. Mutumbi uyo Dare Rinodzora reEuropean Central Bank (ECB) rakafunga kuchengetedza zviyero zvemari zvisina kuchinjika mumisangano yayo yekupedzisira.
Inogona kunge iri nguva yekuchinja shanduko yezvemari kuti kuchengetedza kwedu kubatsire. Nezvikonzero zvakasiyana-siyana zvimwe zvinogona kuoneka Ingangove inguva yakatarwa yekushandura chigadzirwa chemari kuti mari yedu ichengetwe uye titsvage dzimwe nzira.
Imwe yemakiyi ekuita mari yakanaka inoshandisika kuburikidza nekutengwa kwemasheya akachengetedzeka ari mumamiriro ezvinhu. Imwe yekiyi dzekuita mari yakanaka inoverengeka kuburikidza nekutenga kwemasheya akachengetedzeka ari mumamiriro ezvinhu anosimudzira.
Zvichida vatengesi vazhinji havazive kuti kumwe kuchengetedzeka kuri kuoneka mumisika yemari kuitira kuti vakwanise kupinzwa basa. Izvo ndezve Zvichida vatengesi vazhinji havazive kuti kumwe kuchengetedzeka kuri kuoneka mumisika yemari kuitira kuti vakwanise kupinzwa basa
Tichitarisa kumberi kune rino gore ratichangotanga, pfungwa imwechete yekuti vaongorori vakasiyana vezvemari vari kuvhura ndeyekuti varimi vanofanirwa kunge vachiwedzera Kuti vagadzire yavo portfolio yekuchengetedzwa, ivo vanofanirwa kudzivirira zvirevo zvemusika wemasheya kubva kune zvine ngozi mari midziyo
Mwedzi waNdira wave wakanaka kwazvo kune yakasarudzika indekisi yemari yenyika, Ibex 35, iyo yakatangazve chiteshi chekupfuurisa kanenge muchidimbu.Mwedzi waNdira wave wakanaka kwazvo kune indekisi inosarudzika yemari yenyika, Ibex 35 , iyo yakatangazve iyo chiteshi chekuwedzera zvirinani munguva pfupi
Vavaki vemari vakamira mumusika wemasheya vanowana manzwiro asingafadzi nenhau yekuti kambani yemagetsi Endesa ichaderedza Endesa ichaderedza migove yayo kubva muna 2021, uye iri izano rinofungidzirwa muChirongwa Chekuronga
Masheya emusika wemari chikamu chemubhadharo wekambani iyo inosarudza kugovera pakati pevese vagovana vekambani. Imari yakamisikidzwa Mapairo pamusika wechitoro ndiyo chikamu chemubatsiro wekambani iyo inosarudza kugovera pakati pevese vagovana vekambani.
Imwe yemaitiro akakosha emari dzenyika dzakadai seBanco Santander iri pamharadzano mukuchinja kwemitengo yayo. Hakuna Imwe yemhando dzakakosha dzekuenzana kwenyika senge Banco Santander iri pamharadzano mukuenderana nemitengo yayo
Kana iwe uri weiyo inochengetedza chimiro, zvichave zviri nani mu2019 kana iwe ukatungamira mari yako kuenda kumari yemari yakachengeteka kupfuura iyo inosanganisirwa mumisika. Chimwe chezvikonzero zvakakosha kutsanangura shanduko iyi mukutarisa mumisika yemari inokodzera. kune njodzi chaiyo yekuderera kweupfumi
Pfungwa huru pane chikamu chechikamu chikuru chevanoongorora zvemari kuti pane zvikonzero zvakakwana zveinosarudzwa index index Técnicas Reunidas yakaratidza kukwira kwezuva nezuva pamusoro pe3% svondo rapfuura, mushure mekugadzirisa mitengo yayo.
Imwe yematanho anofungidzirwa kuburikidza nemutemo wekushanduka kwemamiriro ekunze ndeyekurambidzwa kwekutengeswa kwemotokari dzedhiziri, peturu nemahybrids mune Imwe yematanho ayo anofungidzirwa kuburikidza nemutemo wekushanduka kwemamiriro ekunze kurambidzwa kwekutengeswa kwedhiziri, peturu uye mota dzakauchikwa
European Stock Market uye Yakakwira Chibereko Mabhandi e2019
Kuti ugadzire yakachengeteka uye yakaenzana mari yekudyara gore rino razvino, uchafanirwa kuve wakasarudzika kupfuura kusvika zvino. Iyo misika Yakakwira goho zvisungo ndeimwe yeanodiwa kutarisana negore rakaomarara uye rimwe rinogona kuve netarisiro yakanaka kwazvo
Haisi chakavanzika kuti gore rino 2019 richange rakaomarara kumisika yese yezvemari, zvese kuenzana uye mari yakatarwa. Aya ndiwo maratidziro avakaita Hazvisi chakavanzika kuti gore rino 2019 richava rakaomarara kumisika yese yezvemari, zvese zviri zvemari nemari yakatarwa.
Kana paine kukosha kuri pakati pekufungidzirwa pachikamu chevashambadziri vadiki nepakati, iri chokwadi Teleco Telefónica. Kana paine kukosha kuri pakati pekufanofungidzirwa pachikamu chevashambadziri vadiki nepakati, zviri pachena iyo teleco Telefónica
Ramangwana remaketi emari yepasi rose akaverengerwa nezvakataurwa nemutungamiriri wepamusoro weFederal Reserve yeImangwana remaketi emari yepasi rose akaratidzirwa nezvakataurwa nemutungamiri wepamusoro weFED kuti zvichave shanduko sei. yemhando
Imwe yemaitiro ekushanda mumisika yemari inogadziriswa kuburikidza neaya anonzi machati manhamba. Ivo vanogona kukupa iwe Imwe yemaitiro ekushanda mumisika yequity inogadzirwa kuburikidza neaya anonzi machati manhamba
Mamiriro ezvinhu epasi rese emisika yemasheya anopfuura njodzi kune zvido zvevashambadzi vadiki nepakati. Iko kusagadzikana ndechimwe chezviitiko zvakaipisisa zvinogona kuitika mumusika wemasheya: musika wekutengesa unovhunduka uye unogona kukanganisa kudyara
Kufanana negore rega rega idzva rinotanga, rine akateedzana enhau zvine chekuita neakanyanya mareti emasheya emasheya eSpanish equities. Mune Mugore rino razvino, zviyero zveSpanish zvichave zvinoumbwa nenhamba dzechengetedzo zana nemakumi maviri nenomwe paMadrid Stock Exchange
Zviratidzo zvese zveiyo nyowani 2019 yemusika wemusika kosi zvirokwazvo hazvikurudziri uye zvinoratidza kuti kusagadzikana kuchange kuripo mune Imwe yematanho ayo vatyairi vese vanofanirwa kuendesa kunze kuti vafunge nezve kuchengetedzwa kunozivikanwa sekudzivirira kana kuchengetedza
Zvese zvinoita sekunge zvinoratidza kuti gore rino harisi kuzonyanya kunakira misika yequity, kunyanya mune mamwe masheya emasheya anoratidza maitiro.Zvese zvinoita sekunge zvinoratidza kuti gore rino harizofadze zvikuru misika yequity, kunyanya mune mamwe misika yemasheya
Simba idzva rekutarisana negore idzva nderimwe rezvishuwo zvinotarisirwa nevanhu vadiki nevepakati kuti vagamuchire 2019, kunyangwe zvichizoenderana nezvinhu zvakawanda. Gore rino pachave nezvimwe zvinhu zvingangogadzirisa mafambiro anogona kutorwa nemisika yekutengesa kubva zvino zvichienda mberi.
Rimwezve gore, SSMM, Varume Vatatu Vakangwara vachashanyirawo vashoma nevari pakati varimi muna Ndira 6. Gore rino, kupfuura nakare kose, zvavari kuda zvichawedzera.Rimwe gore, Changamire Varume Vatatu Vakangwara vachashanyirawo vashoma nevari pakati varimi nezvipo musi wa6 Ndira.
Musika wemasheya muJapan wakatumira chiratidzo chakajeka kuvashambadziri vekuMadokero panguva yeKisimusi uye zvaive zvisina tariro zvachose. Neimwe yemusika weJapan wemusika wekutumira yakatumira chiratidzo chakajeka kuvashambadziri vekuMadokero panguva yeKisimusi uye zvechokwadi yakanga isina tariro zvachose
Kutora pamitengo yazvino, itsika kune vashoma nevepakati varimi kushamisika kana isiri iyo nguva yekupinda mumisika yemari Kupunzika kwemahombe indices indices kwave kuitika mumazuva ekupedzisira egore uye kumanikidza kwekutengesa kwave mutero
United States Federal Reserve (Fed) yakwidza huwandu hwezvibereko nekota yechinhanho kusvika pakati pe 2,25% ne2,5%, zvichiratidza kukosha kwekuita uku kubva kumisika yemari, vane mwero wemari mumisika yemasheya pasi rose
Vhiki rino, chinyakare cheKisimusi raffle ichagovera mari inosvika mamirioni mazana maviri nemakumi masere nemakumi masere, iyo ivo chete vanokunda ndivo vachabhadhara mitero naIwe uri mumwe wevakakunda neKisimusi Gordo yakamirirwa kwenguva refu uchaisa muhomwe zviuru makumi matatu nezviviri zvemazana 2.380 euros pagumi
Hapana mubvunzo kuti kuzivana kukuru nematemu emusika wemasheya kunobatsira varimi kuti vave nani zvakanyanya pakuita Mumisika yemasheya pachave nemazwi mazhinji ehunyanzvi anokwanisa kuverengerwa mudikidiki diki remazwi ehupfumi.
Iko kutya kwekuti kudonha mumisika yepasirese masitoko kunogona kuitika kuri kukonzera chikamu chikuru chevashambadzi vadiki nepakati kuve neiyo Kutya kuti kudonha mumisika yepasi rese yemisika kunogona kuitika kuri kukonzera chikamu chikuru chevashambadzi vadiki nepakati kunyanya kungwarira
Kushomeka kwemari dzekuchengetedzeka idzi, dzinozivikanwawo sekuti chicharros, chinhu chinodzivirira vatengesi kupinda kana kubuda munzvimbo dzavo.Pasi pesangano rekuchengetedzwa kwekufungidzira, kwakateedzana hunhu hwehunhu hweSpanish equities.
Mukati memitero isina kunanga, imwe yeinonyanya kufarirwa ndiyo inodaidzwa kunyoreswa, pakati pezvimwe zvikonzero nekuti inobata munhu wese. Mukati memutero usina kunanga, imwe yeinonyanya kufarirwa ndiyo inodaidzwa kunyoreswa uye inobata zviuru zvevashandisi.
Nemazuva mashoma kwazvo kusvika pakupera kwerimwe gore rekutengeserana, kune mashoma mashoma marongero aunogona kutarisana nawo ekupedzisa gore zvakanyanyisa maererano ne Muvhiki rekupedzisira regore mutyairi anogona kutora mamwe matanho kudzikisa kurasikirwa muchitoro musika waakaunganidza mumakore ano
Imwe yenyaya nyowani nyowani yatiri kuunzwa naDecember ino ndeyekuti kambani yemagetsi Endesa yave pedyo nekusvika panhamba yekusimuka Imwe yenyaya nyowani nhau dzairi kutisvitsa muna Zvita ndeyekuti kambani yemagetsi Endesa yave kuda kumira mu akasununguka-simuka chimiro
Kana zvese zvikaita sekunge zvave kuratidza kuti taive tave kuda kupinda muchivanhu rally yezororo reKisimusi takasangana nenhau dzekuti Hukama hukama pakati peUSA neChina huri kukanganisa zvinopesana nekushanduka kweiyo huru misika yemasheya epasi rose
Mumwe wemibvunzo yakamutswa nechikamu chakanaka chevashambadziri inyaya dzine chekuita nehunyanzvi hwekuongorora. Uye pakati pavo, kudhonza kumashure kwakakosha kuti iwe udzoke kuzoita mashandiro mumusika wemasheya nekuchengetedzwa kukuru uye kugona kuishandisa zvizere.
Eurona Wireless Telecom (EWT), ikambani yekuSpanish yemarudzi ese yekufambiswa kwemashoko inopa Broadband access services, zvakare Icho chokwadi chekuti maEurona masheya atove pasi peyunit unit iri kuwedzera kutengesa kwekumanikidza pamasheya ayo.
Ive nekuchenjerera kwazvo mukati megore rino umo dambudziko nyowani kana hupfumi hwehupfumi hungazobuda. Izvi zvinoonekwa mushure mekushanduka kweiyo Imwe chiratidzo yekuti iyo mwero wehuwandu hwekufarira weUnited States urikupa kune vashoma nevepakati varimari yakakoshawo
Sezvinowanzoitika, chinangwa chikuru chevashambadziri vadiki nepakati kuita kuti zviwanikwe zvakanyanya mukushanda kwavo.
Mamiriro ezvinhu ayo mamwe eanonzi ari kusimukira hupfumi ari kupfuura nawo, achitungamirwa nedambudziko muTurkey neArgentina, arikuenda Kumamiriro ezvinhu ayo mamwe eanonzi nyika dzichiri kusimukira hupfumi arikufamba arikukonzera kuparara kwemusika wemasheya
Imwe yetsika idzo dzinofanirwa kutarisisa mukati megore rino ratichangotanga pasina mubvunzo izuva rakataurwa.Hazvisi pasina, ndeimwe yeimwe yetsika iyo ichafanirwa kunyatsoteerera panguva ino gore ratichangotanga hapana mubvunzo kuti rakanzi Zuva
Imwe yemaitiro anoshandiswa nevashambadzi vadiki nepakati kuratidza kuti ndedzipi tsika musika wemasheya Ndeimwe yemaitiro anoshandiswa nevashambadziri kuratidza kuti ndeapi marongerwo emusika wemasheya ari kutengeswa makuru
Imwe yenyaya dzakasimba dzakagadzirwa muvhiki rino rakakomba chave chakakosha, uye panguva imwecheteyo, kukwira kusingatarisirwi muTelfónica share. Imwe yenyaya dzakasimba dzakagadzirwa muvhiki rino rakasimba ndidzo dzakakosha, uye panguva imwecheteyo, kusimuka kusingatarisirwi muTelfonica share.
Chibvumirano pakati peEngland neEuropean Union pamusoro pekushandiswa kweBrexit uye mabhajeti akawandisa anotumirwa nehurumende yeItaly chichava Chibvumirano pakati peEngland neEuropean Union pachikumbiro cheBrexit chichava chisarudzo chekushanduka kwemisika yemasheya epasi rose.
Ehezve, imwe yenhau dzinonyanya kukosha gore rino ndiko kuita kwakasarudzika kweUnited States stock index, iyo Dow Jones. Isu tinotofanirwa kurangarira kuti iyo Dow Jones yanga ichisimuka zvakadzikama kubva panguva iyo dambudziko rakakomba rehupfumi rakagadzirwa, muna2008.
Vanenge vese vatengesi vanoziva kuti migove ndiyo chikamu chebatsiro chekambani iyo inosarudza kugovera pakati pevagovani vayo. Iwo maDividendendi, mune chero mamiriro ezvinhu, anobhadharwa nemari uye oparesheni iyi yakagadziriswa semi-gore, kunyangwe paine mamwe mafomati
Ichi chiitiko chitsva chemusika wemasheya chakabuda neakateedzana ehunhu nemitengo inokwezva uye izvo zvinogona kugashira kuita zvakanakisa zvechiitiko ichi ndechekuti iwe unozokwanisa kutenga Masaga ezuva nemitengo yemakwikwi kwazvo kubva ikozvino on
Mushure memwedzi yakawanda uye yakawanda kwazvo yekukanganiswa kukwira, misika yemari yeUnited States iri kupa zviratidzo zvekutanga kuti chiitiko ichi chakakwanisa kune rimwe divi reAtlantic.
Kana uchitaura nezve chikamu chekudyara, chimwe chezvigadzirwa zvinozivikanwa zviriko izvo zvinonzi zvigadzirwa zvine indexed. Ivo ndeimwe yeakanakisa Imwe yezvakanakira izvo zvinonzi zvakarongedzwa zvigadzirwa ndezvekuti ivo vari kuvhurira kune akawanda uye akawanda mamodheru mukudyara
Imwe yemakambani ane misika yemari yemari mumavhiki apfuura yave kushamisika nevashambadzi vazhinji, magetsi uye Imwe yenyaya dzakakosha dzeiyi nzira yekumusoro mune rimwe remasangano akakosha emari yenyika ndeyeEndesa
Pachine imwe tariro yekugumisa zvakanaka hukama hwedu nemisika yemari mukati megore rakaoma iri rave remusika wemasheya Pachine imwe tariro yekugumisa zvakanaka hukama hwedu nemisika yemari kana dzimwe nzira dzekudyara dzikashandiswa.
Imwe yemakiyi ekuita kuchengetedza kubudirira kunobatsira iri mukuziva kududzira maitiro uye kushanda mavari nenzira kwayo. Iwe haugone Imwe yemakiyi ekuita mari inobudirira inobatsira manyepo ekuziva kududzira maitiro uye kushanda mavari nenzira kwayo
SWAP ndicho chirevo chechibvumirano chisati chazivikanwa zvishoma nevamwe vamiririri munyika yemari. Kunyanya, inoreva chibvumirano cheSAPAP, chibvumirano chemari pakati pemapato maviri anobvumirana kuchinjanisa ramangwana remari kuyerera zvichienderana nefomula yakatangwa.
Gumiguru yave zvakare iri mwedzi mutema yemisika yemari kuSpain. Mushure mekusvika pazasi pegore kubvira gore Kamwe zvakare, Gumiguru yave zvakare mwedzi mutema kumisika yekutengesa kuSpain, mushure mekunge yasvika pakadzika pagore.
Izvo zvinogona kukwira kumisika yepasi rese yemasheya ichave padhuze nemaviri manhamba kana huwandu hwekukura hunoratidzwa mumisika hunoremekedzwa.Gore rino pachave nematanho emakiyi ekuti aone kuti inzira ipi iyo misika yemasheya ichatora mugore ichave yakaoma kwazvo
Pachokwadi, pave nevazhinji varimi vakafunga kuti uyu mutema Gumiguru ungagume zvakatonyanya mumisika yemari. Iyo Bovespa ndiyo hombe indekisi yemari muBrazil uye ndiyo imwe yematanho evashandisi veLatino
Mukushanda kwemusika wemasheya, hazvidi chete kuti uverenge mabhenefiti anounzwa nemabasa. Kana zvisiri, pane kudaro, zvakakosha Panguva iyo mari inowanikwa inotanga kuoneka muzvikwereti zvakagadzirwa, zvinowanzoitika kuti iwe zvibvunze kana iri mamiriro akakodzera kutengesa
Mukushanda kwemusika wemasheya, hazvisi chete zvakakosha kuti uverenge mabhenefiti ayo mabasa anogona kuunza. Kana zvisiri, pane kudaro, zvakafanira kuverenga iyo inowanikwa muhomwe mumusika wemusika ndiyo musiyano wakanaka pakati pemutengo wekutenga uye nekutengeswa kwemasheya uye zvinoenderana nemari yekushandisa.
Ehezve, gore rino harisi iro rakanaka kwazvo kumisika yemasheya, ndoda vhiki ino yave kuda kupera. Kuderera mumisikaZvechokwadi gore rino harisi kunyatsonaka kumisika yemasheya uye zvakatonyanya svondo rino nekuderera kutsva mumisika
Ehezve, varimi vanopfuura mumwe chete vachanyanya kurohwa nezita reiyi stock index seyakakosha uye inokatyamadza sezvo Stoxx Europe Nhabvu iri imwe indekisi yekudyara mari yako kuburikidza nechimwe chikumbiro kuitira kuti musika uve unobatsira.
Kuputsika kwemusika wemusika ndiko kudonha kwakasimba kwemisika yemari mukati menguva yenguva isina kunyanyisa kureba uye inoratidzirwa Kuparara kwemusika wechitoro ndiko kudonha kwakatwasuka kwemisika yemari munguva yenguva isiri kureba zvakanyanya.
Ehezve, zvigadzirwa zvemari ndeimwe yezvigadzirwa zvakaomesesa izvo varimi vanogona kunyorera kune izvozvi. Kwete zvisina maturo, zviri pachena kuti zvigadzirwa zvemari ndeimwe yezvigadzirwa zvakaomesesa izvo varimi vanogona kunyorera panguva ino.
Kubva mwaka uno wezhizha, varimari vari muchinzvimbo chekusarudza kubva kune dzakasiyana siyana nzira dzinodzidzisa kuti vazive mamiriro epfuma yavo.Mapepanhau ese enhau emapepanhau anopa ruzivo rwekutarisisa kwehunhu hwemhando kana mamwe marudzi emari.
Marozari pamusika wemasheya anounza avhareji yemubhadharo wepakati pe5% uye mune chero zvazvingava zvinoreva kuita mari yakatarwa mukati meiyo musiyano. Nezvikamu zvakaenzana mumusika wemasheya zvinounza avhareji yemubhadharo wepakati pe5% uye mune chero zvazvingava zvinoreva kuita mari yakatarwa mukati meiyo musiyano.
Imwe yemaitiro akakosha kwazvo emari dzenyika dzakadai seDIA yadonha pamusika wemasheya uye yadonha neinopfuura makumi matatu muzana chete. A muzana Yeimwe yeakakosha kukosha kwehunhu equities senge DIA yadonha pamusika wemasheya uye yadonha neinopfuura makumi matatu chete%
Chibvumirano chakasvitswa chekugadzirira kweGeneral State Budget chakatambirwa zvakaipisisa nemisika yemari muchibvumirano chakasvitswa kugadzirirwa kweGeneral State Budget chakagamuchirwa zvakaipisisa nemisika yemari.
Munguva yemazuva indekisi inosarudzika yemusika weSpanish wemusika wakadzikira nehumwe simba, zvinosuwisa kune vazhinji nevazhinji vatyairi Kune akateedzana emakiyi kuti iwe uzive maitiro ekuita mumisika yezvemari mwedzi yekupedzisira yegore uye izvo zvakaoma kwazvo
Imwe yenyaya yemusika wekutengeswa nhau kuti ino matsutso ichatiunzira iko kupinda kwekambani yemafuta CEPSA mumisika yenyika yequity. Izvo ndezve Izvo zvakatangira izvo CEPSA zvainazvo hazvisi kuvimbisa zvakanyanya zvichienderana nemakambani atora zano rebhizinesi iri
Iri zano rinotendera vashandisi kuwana kune akasiyana siyana emhando dzekudyara, asi kubva kune chimwe chigadzirwa chemari. Neiyo Kune akateedzana ezvigadzirwa zvinochengetedza zvimiro zvakasarudzika, ndokuti, izvo zvinobvumidza kusiyanisa mari.
Mumazuva ano imwe yekutarisisa kwemisika yemari iri kuBrazil nekuda kwesarudzo dzemutungamiri wenyika dziri kuitika Mukati memazuva ano chimwe chezvinhu zvinotariswa pamisika yemari chiri kuBrazil nekuda kwesarudzo dzemutungamiri wenyika.
Izvi zviratidzo zvinonyanya kuratidzwa nekuti hazvimbo vimbise kubudirira kwakazara mukushanda, asi ivo vanoita zvirinani zvisarudzo. Zviratidzo zvinozivikanwa nekuti hazvimbo vimbise kubudirira mukuita, asi kunze kwekunge sarudzo dzaitwa pasi pezvakatarisirwa zvinangwa.
Izvo zvinozivikanwa kuti bhangi izwi dhipoziti chigadzirwa chemari umo mutengi anoendesa chitsama chemari kuchinhu cheIzvi izvo vamwe varimi vasingazive ndezvekuti term dhipoziti inogona kusunganidzwa kumusika wemasheya kugadzirisa miganhu yekumira
Imwe yemaseketi mumisika yemari inogona kuisa vashoma nevepakati-vara varimi mukutambudzika kukuru tekinoroji. Imwe yemaseketi mumisika yemari inogona kuisa varimi mumatambudziko zvakanyanya itekinoroji masheya.
Hapana mubvunzo kuti mari dzinozochinja zvakanyanya sekudonha uku. Chimwe chezvikonzero chekutsanangura chiitiko ichi chakakonzerwa nenyaya yekuti sezvo Iko Pasina kupokana kuti mari dzinozochinja zvakanyanya sekudonha uku uye isu tinofanirwa kunyatsoziva mafambiro aya
Chimwe chezvinhu zvisingazivikanwe zvigadzirwa pamusika wemasheya nevadiki vepakati nepakati hapana mubvunzo kuti imari yakadzika yekutengesa pamusika wemasheya. Chimwe chezvinhu zvisingazivikanwe zvigadzirwa pamusika wemasheya nevadiki vepakati nepakati hapana mubvunzo kuti imari yakadzika yekutengesa pamusika wemasheya.
Mwedzi uno uchadzika munhoroondo yekukwevera masheya kune yavo yakaderera nguva mumakore apfuura. Iko kwave nemutengo wayo Mwedzi uno uchadzika munhoroondo yekukweva Telefónica inogoverana pasi nekupererwa kwevatyairi vayo
Ndeapi mabhegi anogona kushamisa kupera kwegore?
Kwangosara kota imwe chete kusvikira gore remari ra2018 ragadziriswa uye izvo zvanga zvichimboodza moyo chikamu chikuru chevashambadziri. Zvese, panenge pasisina imwe sarudzo yekuona kuti ndedzipi nzvimbo dzenzvimbo dzinopa mibairo yepamusoro pakupera kwegore,
Kana iwe ukapedza imwe nguva mumusika wemasheya, iwe unofanirwa kuziva imwe yezviumbwa zvinokubatsira iwe zvakanyanya mukudyara, senge BPA. EPS, ndiyo indekisi inoverenga chikamu chemubhadharo wekambani unogoverwa pakati peimwe neimwe yezvikamu zvinoumba guta guru.
Imwe yemabasa anonyanya kunakira zvido zvevashambadzi vadiki nepakati inogadzirwa kuburikidza nekuchinjisa pakati pemari yeImwe yemabasa anokatyamadza kune zvido zvevashambadzi vadiki nepakati inogadzirwa kuburikidza nekuchinjisa pakati pemari
Imwe yemaitiro akanakisa ekuita chero mari yemari ndeyekuvamanikidza pasi pemamiriro ekuchinja. Iyi ndiyo imwe yemazano akanakisa ekuita chero mhando yemari yekudyara ndeyekuvamanikidza pasi pemamiriro ekuchinja
Chakaipisisa chinogona kuitika hachisi chekuti Spanish stock index iri padhuze nematanho e9.000 poindi. Asi inogona kutungamirwa yakaderera mune yayo maitiro.Kuti kuitira kuti mari ichengetedze, zvichave zvakakodzera kusarudza imwe yemari midziyo iyo ichaita zvirinani kupfuura mamwe ese
Mari dzakatambira hadzina kugashira mushe kudzoka kwemazororo kune chikamu chevashambadziri kunzvimbo dzekutengesa. Kana zvisiri izvo zvese Zviitiko zvakatungamira nyika kuenzanirana kusvika kwakadzika kwazvo nhanho uye kutengeserana pagore risingaperi kugarwazve
Icho chokwadi chekuti iwe unogona kuita chimwe chinhu hazvireve kuti chiite izvozvi. Uye zvakatonyanya kana iwe uchibhejera nemari yako, sezvinoitika nenyaya yekuti iwe unogona kuita chimwe chinhu hazvireve kuti uzviite izvozvi. Uye zvakatonyanya kana iwe uchibhejera nemari yako, sekudyara
Chikamu chemagetsi ndechimwe chezvakanyanya kukosha muzvikamu zveSpanish uye mukati mayo hapana mubvunzo kuti Iberdrola ndiyo kambani inosarudzika yeChikamu chemagetsi ndechimwe chezvakanyanya kukosha muzvikamu zveSpanish uye mukati mayo hapana mubvunzo kuti Iberdrola ndiyo yakasarudzika kambani
Carbures, imwe yeanonyanya kufungidzira kukosha kwenzvimbo dzemunyika, iri kuita misoro mazuva ano nekuda kwenhau dzinogona kupa gwara nyowani kwauri Iwe haugone kukanganwa kuti hunhu hwakadai seCarbures hwakanyanya kusagadzikana kubva pane ese maonero uye chero zano rauri kuzoshandisa
Mumusika mune zvigadzirwa zvakasiyana siyana zvinobatsira kusimudzira basa iri uye zvimwe zvacho zvakanaka chaizvo kuti ubudirire
Kudzoka kwemazororo kune zvakawanda zvakashamisa zvakachengeterwa zvido zvevashambadzi vadiki nepakati nepakati uye izvo zvinogona kuvakurudzira kuti vadzokere kudzoka kwavo kwemazororo kune zvakawanda zvakashamisa zvakachengeterwa zvido zvevashambadzi vadiki vane mutsauko wakakosha mune mamwe maitiro.
Chikamu cheSpanish chekushanya ndicho chechitatu chine simba kwazvo pasirese, kuseri kweUnited States neFrance chete. Ichi ichokwadi kuti iwe unogona kutora mukana weKushanya ndiyo indasitiri yekutanga muhupfumi hweSpain, asi panguva imwechete chikamu chakaparadzwa pamusika wemasheya nemakambani mashoma anomiririrwa mumusika unoramba uchienderera wenyika yedu.
Pfungwa shanu dzekudzoka kune mari mushure mekuenda kuzororo
% Chokwadi, kudzoka kubva kuzororo hakuzove nyore kwazvo kuti iwe ugone kuisa dzimwe pfungwa dzekudyara mukuita
Iri zhizha ratipa isu kushamisika kwakashata kwekuti vashoma uye vepakati varimi vaive vasina. Uku ndiko kunetsekana kwehupfumi mune Izvo zviri kuitika muTurkey chinhu icho varimi vasina uye izvo zviri kunyatso kukonzera kuti varasikirwe nemari yakawanda.
Kutenga nekutengesa masheya ndiyo imwe yenzira dzinoshanda kwazvo dzekuita purofiti kana kuisa mari mukuchengetedza, kunyange hazvo isina matanho
Kunyangwe IPOs ichikanganisa makambani asina kunyorwa pamisika yemari, zvatichaita ndeavo akanyorwa pamusika wemasheya
Kuisa mari mumusika wemasheya kunoda ruzivo rwekutanga kutyaira mashandiro zviine hukuru hwevimbiso yekubudirira. Izvo hazvigone kuitika kuti ini ndoziva Chimwe chezvinhu chinokusiyanisa iwe kubva kune vamwe vadiki nepakati varimimari kuziva rakakura duramazwi pamusika wemusika mazwi
Endesa ndechimwe chekuchengetedza zvakanyanya mumisika yemari uye kusvika padanho rekuti pane zviuru nezviuru zvezvikamu zvinoshandura maoko.
Iyo Internet rave chishandiso chine simba chekuita mari. Mashandiro ayo anowedzerana uye chero nguva yezuva, kunyangwe pamusoro peInternet, chazove chishandiso chine simba chekuita mari, uko mashandiro ayo anowedzera uye chero nguva yezuva.
Ehe, vatengesi vane ruzivo rwakanyanya mumisika yezvemari vanozove nematambudziko mashoma ekushandisa mari yavo nenzira kwayo.Kutanga kuisa mari mumusika wemasheya, zvinofanirwa kugadzira nhevedzano yemakiyi ayo achabatsira kubudirira kwekushanda mumisika yemari.
Kana iwe uchitsvaga imwe nzira kune equities, izvi zviri pachena kuti ndizvo zvakagadzirwa nemisika iri kubuda, kunyanya mune kumwe kuchinjana
Ehezve, chinangwa chikuru uye chega chine varimi vadiki nepakati vane mari kuita mabasa avo mumisika yemari.Zvechokwadi, chikuru uye chete chinangwa icho varidzi vepakati nepakati vane mari kuita mari mukuita kwavo.
Sezvo kupararira kwemutengo wepamberi kuri pamusoro, kuchakanganisa kudzikira kwemari yakamisikidzwa sezvo misika yemasheya iri nyore kuita kudonha kwakapinza.
Iyo pangozi premium ndeimwe yemipimo yakakosha yekuona kushanduka kwemisika yemasheya. Kwete zvisina maturo, vatengesi vanozvitarisa zvese Iyo njodzi yepamoyo ndeimwe yematanho akakosha ekuona kushanduka kwemisika yemasheya pamusoro pezvose.
Iyo Tobin mutero kana ITF imhando yemutero pane zvemari zviitiko zvakarongedzwa makumi emakore apfuura neanotungamira economist weAmerica
Iyo yakakura iyo capital capital inowanikwa, zvirinani kune zvako zvaunofarira, chero izwi iro raunotungamirwa mari dzako.
Kana iwe uchizoisa mari yako mumisika yemari, iwe unenge usina imwe sarudzo kunze kwekuziva dzimwe nzvimbo dzinova idzo dzinoratidzira simba rehupfumi hwenyika.
Chikamu chakanaka chekudyara chinoitwa mumaeuro nekuti ndiyo mari zhinji pakati pevapambi veSpanish. Nekudaro, hazvisi izvo chete zvinokwanisika kushandisa Kuisa mari mune dzimwe nyika mari inokupa mukana wekuti mari dzako dzinogona kuvandudza maererano negoho rakagadzirwa.
Kusarudzwa kwemabhuku emasheya anokupa iwe nemazano akanakisa ekuti mashandiro emusika wemasheya ave nepundutso kubva zvino zvichikosha.
Chero ani achaisa mari yake mumisika yemari anofanirwa kufunga dzimwe dzenzira idzi muongororo yehunyanzvi uye yakakosha inoumbwa nenzira mbiri dzakasiyana asi iwo maviri anogona kuzadzikiswa.
Ehezve, kana iwe uri muzvinashawo ane ruzivo mune misika yezvemari, iwe unenge wanzwa kuti zvine hungwaru kutengesa usati waenda kuzororo.
Zhizha rave pano zvakare uye iri chaizvo mumwedzi yaChikumi naJuly apo kugoverwa kwezvikamu kunosvika pakakwirira kwazvo pegore.
Chii chinonzi PER?
Iwe unofanirwa kuziva kuti iyo PER ndeimwe yeanonyanya kushandiswa ma parameter kuziva kana misika yezvemari inodhura kana yakachipa
Izvo zvinonzi mari yakavhenganiswa zvine chimiro chakasiyana kwazvo sezvo ivo vachitanga kubva kune akasiyana mareti emari uye nemhando dzakasiyana
Ehe, vatengesi vepamhepo ndeimwe yedzimwe nzira dzauinadzo panguva ino kuendesa mashandiro pamusika wemasheya.
Ehezve, kana iwe uri mudiki uye wepakati investor, iwe unozoziva kuti iyo capital kuwedzera inzira iyo iri pedyo yakabatana kune equity misika
Iwe unowana masheya indices emarudzi ese, mamwe anozivikanwa kwazvo asi imwe iyo iwe yausingazombonzwe nezvayo.
Sechikamu chakanaka chevashambadzi vanoziva mushe, mukana wekutora ndicho chirevo chekuti chii chaizvo chinotora bhidha
Vatengesi vadiki nepakati vari muchinzvimbo chekushandisa mamwe marongero ekumisa kudzikiswa kwemari yemusika kusvika panguva iyoyo, ndiko kuti, kurasikirwa kwemari.
Ungazvidzivirira sei kubva pamusika kusagadzikana?
Gore rino uye nekupesana nematanho ese, kusagadzikana kwadzokera kumisika yemari mushure memakore anopfuura matatu pasina kuvapo kwayo mukushanda.
Chikamu chezvemari pane nzira dzinoverengeka dzekuwana mari, mumusika wemasheya imwe yezvikamu zvisingazivikanwe zvakanyanya, isu tinowana mukana mumusika wemasheya nzira inoshanda
Mumakore achangopfuura, sarudzo yekutengesa zviridzwa zvemari mukati mevhiki zvave kuvhura, kunyangwe kubva kumisika yakadaro.
Misika yemari inoita kuti zvikwanise kuvandudza purofiti kuburikidza neimwe nzira asi inobatsira kwazvo fomu yekudyara
Aya madhipatimendi anoumba zano rekutanga rekudzora njodzi uye, sezvinei, unowana kudzoreredzwa pane zvawakachengeta zvinopfuura zvechigadzirwa zvechibhengi.
Sezvaunoshandisa mamwe marongero ekudyara, zvinogara zviri nyore kwazvo kwauri kuti kuchengetedza kunobatsira nenzira kwayo chaiyo.
Pakati pese maIndices emakambani eSpain, iwo ane mareferenzi madiki uye epakati makambani emari anomira kunze.
Ehezve, mumusika wemasheya, kumwe kwekukanganisa kukuru kunogona kuitwa mukusasiyanisa izvo chaizvo zviri rebound uye chii chiri shanduko muitiro
Kusadzikama kuri kusangana nemisika muItari neSpain mazuva ano kuri kuranga zvakaomarara kuchengetedzwa kwakamirirwa nemabhangi
Imwe yenyaya dzakaipisisa yemisika yemari yakaiswa muSpain pazvakange zvisingafungi uye kusagadzikana kwezvematongerwo enyika
Spain, Itari, Middle East neNorth Korea ndidzo dzimwe nzvimbo dzenharaunda dziri kuwedzera kusagadzikana kumisika yemari
Zvinhu zvakasvibirira zvinoita zvine simba nzvimbo yakachengeteka mukutarisana nezviitiko zvisina kunaka zvemisika yemari
Kana paine chengetedzo ine chinzvimbo chekutenga mune yazvino nzira yekutenga, hapana imwe kunze kwekambani yenyika yemafuta Repsol.
Mhedzisiro yekudyara kwehurumende nyowani muItaly
Mashura akaipa mumisika yemari akaiswa muItari, nekuda kwehurumende nyowani ichaumbwa pakati pe5 Star Movement neLa Liga
Chero zvazvingaitika, ese maNokia Gamesa uye ACS vakatungamira muhafu yekutanga yesemester yakaoma iyi yemusika wemasheya
Iko kusimbiswa kwedhora kunochinja sei mari yako wega?
Kana iwe uchida kutora mukana wekukwira kumusoro kwedhora reUS uchipesana neeuro, sarudzo inogutsa kwazvo kusarudza yekutengesa mashandiro
Kana paine musika wepasi rose muzvikwereti zvinogona kubatsira gore rino, zviri pachena kuti yeRussia ine sarudzo dzekuwana purofiti yakakura.
Iwo eEuropean misika yemasheya ari kuyedza kuumba danho reUnited States kusiya chibvumirano chenyukireya neIran uye izvo zvinogona kukanganisa misika.
Chimwe chezvinangwa zvakakosha zvefibonaccio kusimbisa nzvimbo dzekutsigira uye dzekumisidzana kwaungaitira mabasa pamusika wemasheya.
Gore rino, iyo euro inogona kuve yakakosha kwazvo mari yemari kuona shanduko yemari mumwedzi iri kuuya.
EPS kana mibairo pachikamu ndeimwe yematanho ayo anofanirwa kutariswa kupinda mumisika yemari
Volatility chinhu chakakosha mumisika yemari inogona kuita mari kana mamiriro aunoda akasangana muhupfumi
Chokwadi wakambonzwa kanopfuura kamwechete kuti zvigadzirwa zvemari ndezvipi. Nechinangwa chekutanga chekudyara mune izvi zvigadzirwa kuwedzera purofiti yezvinhu zvako
Iberdrola afunga kuvhura mari yekutora kune muparadzi weBrazil Eletropaulo nechinangwa chekutenga pakati pe51% ne100% yemugovana.
Kurwiswa kwakabatana muSyria kunogona kukuvadza shanduko yemusika wemasheya kana ikachengetedzwa nekufamba kwenguva, chimwe chinhu chisiri kuitika
Nzira yekuona peas?
Chicharros akanyorwa akachengetedzeka ayo anowanzo tenderera kumabasa ekufungidzira uye anoita mari munguva pfupi
Arcelor naAcerinox vanoteverwa nenhamba yakanaka yevarimari vashoma nepakati vanoongorora kuti yavo yemitengo inogona kuchinja mukati megore rino.
Mhedzisiro muna Kubvumbi kurwisa musika webere
Kubvumbi mwedzi unonakidza kwazvo wekubhadharwa kwezvikwereti uye izvo zvinogona kuchinja zano rako nekutanga kwekota yechipiri yegore.
Iyo sicav rudzi rweCollective Investment Institution yemubatanidzwa, ane chinangwa chakakosha kuunganidza mari
Misika inosimuka inogona kunge iri imwe nzira inobatsira kwazvo izvozvi, iwe unoda kuziva zvimwe zvezvikonzero zvakakosha here?
Iyo kambani yekuvaka ACS, kuburikidza neHotchief, yasimbisa chibvumirano "chinosunga" chekutanga mubatanidzwa wekutora mubhadharo weAbertis.
Yenguva refu yekudyara: izvo zvaunoda kuti uzive
Iyo yenguva yakareba ndeyekusingaperi iyo inoda yakanyatsotsanangurwa yekudyara zano uye kunyange chaiwo maitiro
Makapu ebhuruu ndiwo machengetedzo anounza yakanyanya kudhurirwa mumari uye ayo anopa akateedzana eakanyanya kutsanangurwa hunhu
Volatility ndeimwe yesarudzo dzekudyara dzimwe nguva apo shanduko yemusika wemasheya isingafarire
Iyo yakaenzana mutual fund portfolio ndeimwe yemhando dzakanakisa mabikirwo ekuchengetedza kuchengetedza munguva dzakaomesesa
Iwo maitiro ecyclical ari nyore kufungidzira sezvo iwo mitengo inoenderana nehupfumi kutenderera uko musika wemasheya unokura
Yakavimbisirwa mutual mari inokupa iwe mukana wekuchengetedza yakatarwa uye yakavimbiswa mari gore rega
Chinodiwa kuti unyatso chengetedza mari ndeyekuchengetedza masheya, zvikamu uye indices dzemasheya pamwe neyakagadziriswa
Zvikwereti zvekudyara zvakagadzirwa kuitira kuti varimi havafanirwe kugoverana nemasheya avo panguva dzisingafadzi
Imwe yemaitiro kuitira kuti zvikanganiso zvisaoneke gore rino ndeyekuburitsa pachena kuti ndezvipi zvakaitika mugore rapfuura
Iyo PER ndiyo imwe yemipimo yakakosha yekusarudza kukosha mumusika wemasheya uye inoratidza kuti mutengo unodhura kana wakachipa
Kugadziriswa hakufanirwe kutorwa sekushata, asi mukana unopihwa nemisika yekutenga zvakachipa
Mukudyara mune makiyi anotendera kuti kuchengetedza kuchengetedzwe zvakanyanya, pamwe nekuzvidzivirira kubva pazviitiko zvisina kunaka.
Takatarisana nemamiriro ezvinhu akaderera, varimi vane akateedzana ezvigadzirwa zvemari zvinogona kuita kuchengetedza kunobatsira
Kuisa mari mumusika wemari gore rino kunopa akateedzana matipi anozoita kuti zvive nyore kwauri kuti uwane kudzoka zvinoenderana nezvaunoda
Tourism ndiyo imwe yemapazi ari kusimuka uye ane hunhu hunogona kuita yedu yekudyara portfolio kwemwedzi iri kuuya
Iwo manhamba akakosha kuona mashandiro mumusika wemasheya, zvese maererano nekutenga nekutengesa
Iko kushomeka mune yekudyara kunofanirwa kuve pasina mubvunzo chimwe chezvinangwa kana iwe usiri kuda kuve neanopfuura dambudziko rimwe nenyika yemari.
Ndezvipi zvakanakira iyo Ibex kukwanisa kuenda kumakumi mapfumbamwe emapoinzi?
Kushaya simba kwave kuiswa muIbex 35, kunyange hazvo panguva ino mutengo wechengetedzo ungareva mukana wekutenga
Kubva gore rapfuura, MAB yakapa maviri matsva emusika wemasheya maunogona kuita kuti mari yako ibesere.Unoziva here kuti vari sei?
Gore rino ringave iri mukana wekudyara mune akati wandei emasheya pamusika wemasheya, senge iwo akasara zvakanyanya
Kune akawanda mari yekudyara zvekuti iwe unogona kuagadzirisa iwo kune akasiyana mamiriro emisika yemari uye nhoroondo yaunopa